Nooca Aamusnaanta & Weelka Nooca Gaaska dhaliya Gaaska Soo Saaraha iyo Warshad | Naipute
Awoodda adduunka ee hadda jirta ayaa marba marka ka dambaysa soo shaac baxaysa, dadka shuruudaha ay u qabaan ilaalinta deegaanka ayaa sidoo kale sare u sii kacaya.
Aamusay Generator Aamusnaan ah
Maaddaama ay tahay kayd koronto oo loogu talagalay shabakadda korantada, soo-saare aamusiyaha ayaa si ballaaran loo isticmaalay sababtoo ah buuqooda hooseeya, gaar ahaan isbitaallada, hudheelada, meelaha ay ku nool yihiin dadka ugu sarreeya, suuqyada waaweyn ee laga dukaameysto iyo meelaha kale ee leh shuruudaha adag ee jawiga waa lama huraan lama huraan ah qalabka. Qaybaha awoodda sare leh sawaxankooda sare awgood, kaliya qaddarka badan ee buuqa la dhimayaa ayaa ka dhigi kara heerka buuqa qaybta inuu buuxiyo shuruudaha ilaalinta deegaanka ee hadda jira. Sababtaas awgeed, shirkadeena waxay ku bixisay wax badan oo shaqaale ah iyo qalab si ay u horumariso sanduuq aamusan oo leh waxqabadka dhimista dhawaaqa wanaagsan.
Tani waxay badbaadinaysaa macaamiisha lacag aad u badan si ay u dhisaan qol matoor, taas oo yareyneysa mashaariicda yareynta buuqa qolka koronto dhaliyaha.
Noocyada qalabka koronto-dhaliye aamusan
1. Waxqabadka sawaxanka oo hooseeya, waxay si wax ku ool ah u yareyn kartaa buuqa koronto-dhaliye la dejiyey.
2. Qalabka dhaliyaha gaaska aamusani wuxuu leeyahay naqshad kooban, rakibid sahlan, muuqaal qurux badan, iyo midabbo kala duwan ayaa loo habeyn karaa.
3. Isticmaal isku-dheelitir la'aanta isdaba-marinta iskudhafka nooca loo yaqaan 'acoustic enclosure', qalabka wax lagu xiro ee isku-xirnaanta ballaadhan.
4. Isticmaal yareynta dhawaqa wax-ku-oolnimada yareynta marinnada badan ee kanaalka iyo marinnada qiiqa si aad u hubiso in cutubku leeyahay awood wax ku filan.
5. Isticmaalka farsamo isku dhafan ayaa ku habboon dayactirka dambe.
Nooca weelka dhaliyaha gaaska la dhigo
Qalabka dhaliyaha gaaska ee weelka ayaa dejinaya qaab dhismeedka guud ee ku lifaaqan, kaas oo buuxin kara shuruudaha dejinta, maaraynta iyo hawlgalka unugga.
Albaabka dayactirka golaha wasiiradu wuxuu qaataa naqshadeynta albaabka sanqadhiisu jaban tahay, sheyga kuleylka kuleylka gudaha ee golaha wasiiraduna wuxuu qaataa maaddooyinka ololka-celiya ee bey'ada u fiican, oo leh shaqooyinka ilaalinta kuleylka iyo kuleylka kuleylka iyo yareynta buuqa.
Qaybta sanduuqa waxaa ku rakiban laambad iftiinkeedu yahay DC 24V oo aan walxaha qarxi karin, saxan mesh galvanized ah ayaa lagu dhejiyay gidaarka gudaha, waana la rinjiyeeyay, dusha sarena waa siman yahay oo qurux badan yahay.
Dusha sare ee jirka sanduuqa waxaa ku dahaaran rinjiga ka hortagga daxalka ee mashiinnada dekedda, kaas oo ka hortagi kara qoyaanka, daxalka, qorraxda iyo buufinta milixda.
Naqshadeynta booska golaha wasiirrada ee cutubku wuxuu buuxiyaa baahiyaha boos-maalmeedka dayactirka ee saddexda dhinac iyo kan sare. Waxaa jira jaranjarooyin fuulitaan ah, albaabada baaritaanka iyo dayactirka, aaladaha lagu joojiyo xaaladaha degdegga ah, sanduuqyada bullaacadaha, iyo aaladaha dhulka lagu tuuro ee ka baxsan sanduuqa.
Waxay ku habboon tahay jawiga shaqada ee banaanka, waxayna noqon kartaa mid aan roob qabin, boodh-celin karin, kuleylka kuleylka, dab-demiska, daxalka iyo duufaanta-caddayn.
Hore: Qeexitaanka alaabta ee 10 Kw LPG Generator Gas
Xiga: Agabka Ikhtiyaariga ah
Faahfaahinta alaabada ee 400KW Biomass Gas Ge ...
Faahfaahinta alaabta ee Gaaska Dabiiciga ah ee 1000KW / ...
Qeexitaanka alaabada ee 30 KW Gaaska Dabiiciga / ...
Faahfaahinta alaabada ee 200KW Gaaska Dabiiciga / ...
Faahfaahinta alaabta ee 50KW Gaaska Dabiiciga / Bi ...